Badhasaabka Saaxil Oo Ka Hadlay Baaqayo Cabshooyin Lagaga Soo Horjeeday Oo Madaxweynaha Loo Gudbiyay, Dareenkiisa Maareeyaha Cusub , Dhaliilaha Xukuumadda Ee Gobolka Iyo Qurbajooga – Araweelo News Network (Archive)
Badhasaabka Saaxil Oo Ka Hadlay Baaqayo Cabshooyin Lagaga Soo Horjeeday Oo Madaxweynaha Loo Gudbiyay, Dareenkiisa Maareeyaha Cusub , Dhaliilaha Xukuumadda Ee Gobolka Iyo Qurbajooga
Berbera(ANN)Badhasaabka Saaxil Maxamuud Cali Saleebaan (Ina Cali Hayste), ayaa jawaab ka bixiyay canbaaraynta iyo cabashooyinka qaybo ka mid ah bulshada Gobolka Saaxil u jeediyaan maamulkiisa iyo shaqadiisa oo qaarkood loo gudbiyay Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed
Maxamuud Siilaanyo. Mr. Ramaax wuxuu sidoo kale ka hadlay dhaliilaha qurbajooga Saaxil ku tilmaamaan maamulkiisa iyo guud ahaan cabashooyinka dhinaca adeegyada aasaasiga ah ee gobolka oo ay qaar baddan oo bulshada gobolku sheegaan inaanay Xukuumadda uu wakiilka u yahay waxba ka qaban.
Sidoo kalena wuxuu ka hadlay dareenkiisa Maareeyaha cusub Eng. Cali Xoor Xoor oo Madaxweyne Siilaanyo dib ugu soo celiyay Marsadda mihiimka ah ee dekedda Berbera. Mr Maxamuud Ramaax waxa uu arrimahaa iyo kuwo kaleba kaga hadlay waraysi khaas oo ay shalay kula yeesheen xafiiskiisa tafaftirayaasha shebekadaha Araweelonews Carraale Maxamuud Jaamac iyo Berberanews Maxamed Siciid oo hawlo shaqo u jooga magaaladda Berbera, waraysigaa oo marka hore warbixin kooban oo xaalada gobolka ah uu kaga bixiyay Mr. Ramaax ayaa u dhacay sidan:-
Jawaab: Xaaladda guud ee gobolku waa mid nabadgelyo oo ah ta ugu muhiimsan, waana gobolka ugu dembiyada yar Gobollada Somaliland, waa gobol ganacsi oo isugu jira dhul-xeebeed, dhul oogo ah iyo guban, immikana waxay Berbera ku jirtaa dhawrka billood ee ugu cimilada wanaagsan, guud ahaan xaaladdu aad bay u fiicantahay.
Su’aal: xagga waxbarashada iyo Caafimaadka cabashooyin badan baa ka jiray Gobolka Saaxil illaa hadda maxay xukuumadda cusub ka qabatay?
Jawaab: Geedka marka la beero muddaa la sugaa oo uu soo baxaa, waxaad moodaa in dad hore u gabay waajibaadkii dalka iyo umaddu ku lahaa ay qabtaan inay had iyo jeer gabbood ka dhigtaan dhalliilo, laakiin waxa gobolka Saaxil laga qabtay ma qarsoomayo. Haddaan kuu soo qaato waxbarashada waxaan aaminsanahay inay tahay meelaha isbedelka weyni ku dhacay, haday tahay iskuulada iyo maamulka oo si aanu u toosino laba goor isbedel ka dhacay iyo meelaha qaar oo saddex goor ah, si loo toosiyo hannaanka waxbarashada. In badan baanu ku faani jirnay gobol ahaan miisaaniyadayadu waa 15 milyan bishii, in ka badan kala badh waxaanu u leexinay inaanu waxbarashada gelino oo macalimiin dheeraada ugu qabano, Guddi waxbarasho oo ka kooban maamulka gobolka ayaanu u sammaynay oo waxaannu u helnay dhaqaale dheeraada oo macalimiintu ku qanacsantahay, iyadoo waxbarashaduna kor u soo kacayso, laakiin maalin qudha amma sanad-dugsiyeed waxbarashadu iskuma bedelayso.
Waxaanan filayaa inaanu ugu horayn doono gobollada dhinacyada dhismayaasha iskuulada oo aanu meelo badan ka dhisnay gaar ahaan Berbera, laakiin dhisme waxba ma taro, waxaannu xoogga saarnay sidii loo dhisi lahaa macalimiinta iyo ardayda. Awoodda ugu badan waxaannu saarnay sidii loo heli lahaa macalimiin tayo leh, loona heli lahaa wax ku filan meel fiicana way noo maraysaa.
Su’aal: Badhasaab ahaan waxaad tahay badhasaabka ugu dhaqdhaqaaqa badan badhasaabyada dalka, dad badana waxay aaminsanyihiin inaad tahay masuul garanaya awooddiisa xilka uu hayo, laakiin khaladaad baddan gala, waxaana jirtay cabashooyin badan oo dadka deegaanku Madaxweynaha gaadhsiiyeen, arrimahaa sidee baad u aragtaa xaggee bayse marayaan?
Jawaab:Run ahaantii, isma faaninayo, laakiin shaqada halkan [Saaxil] ii taala waa inaan fuliyaa, waxkasta oo la qabanayona wada-tashi baanu ka yeelanaa aniga iyo ku-xigeenkayguba, waxaanaannu meesha u joognaa inaanu fulino siyaasadda dawladda, taa iyada ah dad badan baa u haysta inuu xafiis iska caadiya yahay xafiiskaygu. Xafiiskan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland baan wakiil uga ahay iyo dhammaan wasaaradaha Gobolka ka hawlgala oo aanu wakiil uga nahay wasaaradahooda, si aanu siyaasaddii wasaaradda oo la jaanqaadaysa siyaasadda guud ee dalka ku hagno, markaa waxa nagu waajiba inuu dhaqdhaqaaqayagu bato oo inuu kormeerkayagu bato. Way dhici kartaa meelaha qaar inaanu ku qaldano, lamana odhan karo wax walba waanu ku saxanahay laakiin siyaabihii hore uga jiri halkan kama jiraan, nin xafiis iska fadhiya oo iska yeesha ma yeelayno mana aqbalayno, waana inuu ka soo baxo xilka iyo waajibaadka qaran ee saarnaa, anagoo ka duulayna siyaasadda dawladda oo ah in wax la qabsan karo, in bulshada loo adeego oo xafiis kastaa shaqadiisa ka soo baxo illaa kuwa dakhli ururinta.
Dad badan baa leh, maxaa badhasaabku u soo farogelinayaa, waa run ilaa dakhliga la ururinayo ayaanu farogelinaa maamul gobol ahaan si aanu ula socono xafiiskaasi inuu gudabayo shaqadiisa iyo in kale.
Arrinta cabashooyinka deegaanka kuma sii dheeraanayo, way jirtaa dadka in maamulka taageersan iyo dhalliilsaniba, mana wada saxnin oo bini’aadam baanu nahay, mana diidayno wixii tallooyin ah ee nalagu toosinayo ee talo naloola yimaado, laakiin awooddayada ma bixinayno.
Su’aal: Waxa jirta isbedel lagu sammeeyay Maamulka Dekedda Berbera, oo la keenay maareeye muddo dheer soo waday, adigu sidee baad u aragtaa?
Jawaab: Anigu waan soo dhawaynayaa sababtuna waxay tahay dee xilku waa meerto shalayna nin baa joogay maantana nin baa jooga, hadalkaasna waxaan la sugayaa xil-wareejinta kana sii hor dhici maayo, ammar kasta oo dawladda ka soo baxa inaanu fulinno waajib na saaran weeyaan.
Su’aal: Dad badani waxay isweydiinayaan ‘sidee bay u wada shaqayn karaan Ramaax iyo Cali Xoor Xoor oo isagu awood badan ku lahaa Gobolka’ maxaad kaga jawaabaysaa taa?
Jawaab: Waxaan kaga jawaabayaa inaanu wada shaqayn karno… kkkkk [qosol] sharci iyo nidaam baa la kala leeyahay, Calina runtii waa nin muddo badan halkan [Dekedda] ka soo shaqaynayay, nidaamkii horena la shaqaynayay, way jirtaa rag dawladdii hore la shaqaynayay immikana wadashaqayni naga dhaxayso sida Maayarka Berbera oo kale, isaguna [Cali Xoor Xoor] inuu nagu soo biiro, anaguna aanu soo dhawayn doono, waxaanan filayaa wadadii aanu haynay inuu qaadi doono.
Su’aal: Xagga qurbojooga Gobolka Saaxil oo inta badan aad uga soo horjeeda amma dhalliila siyaasadahaaga maxaad kaga jawaabaysaa.?
Jawaab: Qurbojooga ka mid baan ahay, qofku marka uu dalka ka maqanyahayna wax badan baanu fahamsanayn, anigu ma ahayn ragga qaarkii. Qurbojoog waan ahaa laakiin waan ka soo noqday, siyaabaha qurbojiigu u fekeraana waan aqaanaa, siyaabahay u dhaqmaan, aragtiyaha ay dalka ka haystaan, waxaanse u soo jeedinayaa inay xaqiiqda ku soo dhawaadaan oo ay ka baxaan khayaaliga iyo beentana iska daayaan.
Published December 21, 2011 By info
Shirkadda Ugu Caansan Shirkaddaha Furniture-ka Somaliland Al- Nuur Oo Bushaarooyin Qiima Dhimis Lix Bilood Ah Iyo Fursado kale Oo Mihiim Ah Ku Baaqday
Cusbitaalka Guud Ee Hargeysa Oo Qaadhaan Loo Weydiiya Bulshada Somaliland